देश चिरा पार्न खोज्ने सिके राउतको टाउको काटेर फुटबल खेल्ने धम्की दिने यी युवती को हुन् ? - सुदूरखबर डटकम
देश चिरा पार्न खोज्ने सिके राउतको टाउको काटेर फुटबल खेल्ने धम्की दिने यी युवती को हुन् ?
label समाचार प्रकाशक query_builder September, 21 2018
काठमाडौं । पछिल्लो समय बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै आन्दोलनमा हुमिएकी सामाजिक अभियान्ता सावित्री सुवेदी फेरि पनि चर्चामा आएकी छिन । उनले राज्य विप्लवको कुरा गर्ने सिके राउतको टाउको काटेर फुटबल खेल्ने धम्की दिएकी छिन । उनले युरोप, अमेरिका र भारतीय डिजाएनमा सिके राउतको आन्दोलन भएको हुनाले यस विषयमा सरकारले समयमा नैं सोच्नुपर्ने बताएकी छिन ।
उनले नेपाल बुद्ध भुमि भएको हुनाले नेपाललाई भारत र चीनको प्रयोगशाला बनाउँन खोजिएको भन्दैं यस कुरामा सबैं सचेत हुनुपर्ने जनाएकी हुन । उनी यसअघि पेटीकोट आन्दोलनकी अभियान्ताको नामले पनि चर्चामा रहेकी छिन । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा सुवेदीले यस्तो आक्रोश पोखेकी हुन । यो उनको पोष्ट निक्कै भाईरल बनेको छ ।